Misoro yenhau, Chitatu, Kubvumbi 13, 2021
Gavhuna weRBZ Doctor John Mangudya negurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube voramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwopa kuti mitengo yezvinhu iite chamurambamhuru vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikan emunyika
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kuSouth Africa zvave kugara zvakabatira ura mumaoko nekutyira kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvichitevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe VaElvis Nyathi munyika iyi.
Muzvare Mary Mubaiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act vachinzi vakanyepera mejastiriti kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana, vanova mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC kuzeya nezvehondo yekurwisa vanopfurikidza mweo kuCabo Delgado kuMozambique.
Vagari vekuMasvingo vochema chema nemvura ine tsvina iri kubuda mupombi dzemba dzavo.
Vabereki votatarika kutora magwaro ekuzvarwa kwevana vavo nezvikonzero zvakasiyana siyana kuMashonaland West.
Muchirongwa cheDiaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tiri kutaura nezvekusagadzikana kwezvinhu kuSouth Africa uye hondo yekuUkraine.